Sidee ayey noqon doontaa shaxda ay ku soo geli doonto kooxda Real Madrid kulanka Girona? – Gool FM
(Madrid) 15 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa eegeysa inay sii dheereysato rikoorkeeda guulaha, isla markaana ay gaarto guusheedii lixaad oo xiriir ah horyaalka La Liga, marka ay Axadda Bernabeu ku soo dhoweynayaan naadiga Girona.
Madrid ayaa wada guuleysatay shantii kulan ee ugu dambeeyey ee ay ciyaartay horyaalka Spain, waxaana ay soo yareeyeen farqigii badnaa ee u dhexeeyey iyaga iyo Barcelona, iyagoo ku soo koobay lix dhibcood oo kaliya.
Girona ayaa guuldarreysatay mid kasta oo ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka iyagoo fadhiya kaalinta 17-aad ee kala sarreynta La Liga.
Kooxda Tababare Santiago Solari ayaa guulo ku naalloonaysa todobaadyadii ugu dambeeyey iyagoo kulankii horyaalka La Liga ee la soo dhaafay 3-1 uga adkaatay Atletico Madrid oo ay booqdeen, kooxda cad-cadka ayaana haatan ka dambeysa Barcelona.
Los Blancos ayaa sidoo kale kulankan ciyaari doonta iyadoo 2-1 guul kaga gaartay Arbacadii Ajax lugta hore ee wareegga 16-ka Koobka Horyaalladda Yurub ee UEFA Champions League.
Real Madrid waxaa kulankan ka maqnaan doona Luca Zidane oo qaba dhaawac muruqa ah iyo Marcos Llorente oo la dhibtoonaya dhaawac dhanka gumaarka ah, iyadoo shaki laga galinayo kulankan Raphael Varane oo xanuunsan iyo Isco oo dhaawac dhabarka ah qaba.
Weeraryahanka reer Wales ee Gareth Bale ayaa lagu soo bilaabay kulankii ay Los Blancos wajahday Ajax ee Champions League, laakiin ciyaaryahankan ayaa markale dib ugu laaban kara kursiga keydka kaddib bandhig xumadii uu muujiyey kulankii Ajax.
Haddaba shabakadda ciyaaraha ee Sports Mole ayaa soo bandhigtay sida ay noqon doonto shaxda ay ku soo geli doonto Real Madrid kulanka Axadda ee halkaan hoose ka eeg:-